Ravensburger: Nyowani app yeiyo yekare classic board mutambo - Spielpunkt - Mitambo yebhodhi nemitambo yemavhidhiyo
Ravensburger: Nyowani app yeiyo yekare bhodhi mutambo wekirasi
Yakatumirwa ne Andre Volkman | Apr 30, 2022 | Mitambo yebhodhi nemakadhi, nhau
Mushure memakore anopfuura makumi matatu nemitambo inodarika mamirioni makumi maviri yatengeswa, mutambo wemhuri wepasi rose "The Crazy Labyrinth" uri kuwana app nyowani ine dhizaini yechizvino. Izvi zvinoziviswa neimba yekutsikisa Ravensburger. Inosanganisirwa mutambo wekutanga mushanduro itsva kubva ku35 pamwe neiyo junior vhezheni yelabyrinth kubva 20. Unogona kutamba wega kana muvatambi vakawanda nevatambi vana pamudziyo mumwe. Iko kupenga kutsvedza kunakidzwa kunowanikwa muApp Store ye2021 euros.
Mudhijitari maze, vatambi vanodzungaira mulabyrinth sen'anga, muroyi, svikiro uye mudzidzi wehuroyi. Zvikasadaro zvakangofanana nekugara: Vatambi vanofambisa mikoridho nemadziro kuti vasvike kune pfuma uye zvisikwa zvengano zviri pamakadhi avo akavanzika. Ani nani akatanga aongorora zvakavanzika zvese uye akadzokera kunzvimbo yavo yekutanga akunda iyo inopenga kusunda neiyo yakapfava uye panguva imwechete yakasarudzika mutambo musimboti. Nekuda kwekurongeka kwakarongeka kwemagiya, mutambo wega wega wakasiyana. Saka kufara kusingagumi kunovimbiswa.
Mamwe edhisheni yelabyrinth inogona kutengwa
Yekuwedzera labyrinth editions inogona kutengwa mukati meapp kubva EUR 2,99. Izvi zvinosanganisira "Master's Labyrinth" ine nzira itsva zvachose yemutambo uye "Ocean Labyrinth" ine makadhi ezviitiko zvinonakidza. Idzo shanduro "Germany Labyrinth" uye "Japan Labyrinth", idzo dzakamboburitswa munyika yakatarisana, dzinogona kutengwa muapp. Kune tutorials kune yega yega mutambo musiyano we labyrinth newbies. Iyo app zvakare inotsigira mitauro mishanu, kusanganisira chiGerman, Chirungu, French, Italian uye Spanish. Sezvineiwo, huwandu hweshanduro dzemitauro idiki kana ichienzaniswa neyekare: Iyo inopenga labyrinth yakanga yatoshandurirwa mumitauro makumi matanhatu ne2011, Ravensburger akazivisa panguva iyoyo.
Nekuti iyo yekutanga pfungwa uye chimiro chinoenderana neyekutanga, vana kunyanya vanogona zvakare kubatsirwa nekutamba dhijitari inogadziridzwa: kufunga kwenzvimbo uye kuisa pfungwa kunodiwa kumutambo wekuisa.
Iyo "Ravensburger Labyrinth" app yave kuwanikwa muApp Store kuburikidza neApple iOS neGoogle Android.
Iwo maapplication matsva haasi ekutanga edhijitari adhijitari: Ravensburger akaburitsa mutambo senge HD vhezheni yeIOS kumashure muna 2011. Uye handizvo zvoga: The crazy labyrinth yakaonekwa sePC computer game paCD-ROM muna 2001, uye muna 2008 Dtp Entertainment yakatumira vhezheni yeNintendo DS.
Ravensburger 20543 - Tiza iyo Labyrinth, uuye nemutambo we1-4... * 6,99 EUR tenga
Kare Twilight Empire: Roll uye Nyora iri kuuya
Inotevera Crypto mitambo: Iyo Sandbox uye Star Atlas inoita iyo hombe bang
Nintendo Chinja: kutengesa muJapan kunze kwePlaystation
Star Wars Pen & Pepa: Iwo akanakisa ekuwedzera pakungotarisa
Anime Gungano: DoKomi inovhura pakupera kwevhiki kwePendekosti